Global Aawaj | » पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट कुन देशमा कतिको मृत्यु? पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट कुन देशमा कतिको मृत्यु? – Global Aawaj
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट कुन देशमा कतिको मृत्यु?
काठमाडौ । विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोनाभाइरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ । छोटो समयमै ठुलो रुप लिएको कोरोनाबाट अहिलेसम्म ४ करोड ८४ लाख ११ हजार संक्रमित भैसकेका छन् । यस्तै, १२ लाख ३० हजार १ सय जनाको मृत्यु भैसकेको छ ।
वर्ल्डोमिटरका अनुसार ३ करोड ४६ लाख ५६ हजार उपचारपछि निको भएका छन् । विश्वको २१६ देशमा फैलिएको कोरोनाबाट थोरै देश मात्र यसबाट बच्न सकेका छन् । यस भाइरस गत डिसेम्बर चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको बताइन्छ । त्यसपछि इटली, स्पेन हुँदै अहिले अमेरिका, ब्राजिल र भारतलाई इपिसेन्टर बनाएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा कोरोनाबाट ब्राजिल र भारतमा मृत्युदर उच्च रहेको छ भने संक्रमितदर पनि उच्च रहेको छ । कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ लाख ६८ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यो बिहिबार बिहानसम्मको अपडेट हो ।
साउदी अरेबिया -१५
डेमोसियन रिपब्लिक -५
एल साल्भाडोर -५
नर्थ मेसोडोनिया -२२
दक्षिण कोरिया -२
फ्रेन्च पेनेस्युला -१
गुनिया बिसाउ -१
सेन्ट मार्टिन -३